Inona no mahatonga ny sarimihetsika "Cult" Film?
Ahoana no iantsoana ny "Cult Classic"
Ny filma toy ny "Mandeha amin'ny rivotra" ary ny "The Godfather" dia noraisina ho sangan'asa amin'ny ankapobeny raha vao mahita azy ireo voalohany ny mpihaino azy, ary ny fahombiazan'ny biraon'ny krizy sy ny karajia dia maneho izany. Saingy misy sarimihetsika hafa izay ahafahana mandresy ny vahoaka mandritra ny fotoana lava be, mitombo tsikelikely ny mpankafy sy ny fanindrahindrana amin'ny alàlan'ny tenim-borona ataon'ireo izay mahatsapa fatratra ny sarimihetsika.
Ny teny hoe "film cult" (ary taty aoriana "cult classic" ho toy ny sarimihetsika) dia ampiasaina hamaritana sarimihetsika iray izay namolavola kely, saingy manan-danja sy be voatokana, fanbase izay mihalalina.
Raha toa ireo mpanangom-baovaon-daka tahaka ny " Star Wars " sy " Harry Potter " dia manana mpankafy be mpankafy toy ny hoe ny sarimihetsika dia toa mitovitovy amin'ny kolontsaina, ny teny hoe "film film" dia manondro manokana ny sarimihetsika fa na eo aza ny fahombiazany ara-bola tsy dia fahita loatra, mpankafy.
Na dia misy sarimihetsika izay baomba na tsy fahampiana ao amin'ny birao baskety isaky ny faran'ny herinandro izay mbola mahavita mandresy mpankafy vitsivitsy, sarimihetsika maromaro no manentana ny fanoloran-tena lalina mba hampivoatra ny fanoloran-tena manokana. Ireo "kuliana" natokana ho an'ireo sarimihetsika ireo dia nitombo satria ireo mpankafy mpankafy dia nanely ny teny momba an'io tsy dia fantatra io, saingy (araka ny heviny) dia tsy maintsy mahita sarimihetsika.
Ny tantaran'ny kolokoloko
Tamin'ny vanim-potoanan'i Hollywood, sarimihetsika vitsivitsy no nanana fahafahana hampivelatra ny kolontsaina noho ny fivarotana tsy tapaka ao amin'ny teatra ary ny tsy fahampian'ny fizarana manaraka amin'ny haino aman-jery toy ny fahitalavitra na horonantsary an-trano izay ahafahan'ny mpijery mijery horonantsary ivelan'ny hazakazaka an-tsehatra voalohany.
Na dia izany aza, sarimihetsika vitsy tsy nahazatra no nahatratra ny lazany tamin'ny fandrakofam-baovao tamin'ny alina, toy ny horonantsary "Freaks" 1932 MGM.
Taona maro taty aoriana, ny fahitalavitra dia hanaraka ny fitarihana. Mitady fandaharam-bola mora foana, maro ny sarimihetsika amin'ny fahitalavitra dia mety hilalao horonantsary, horohoro, na sarimihetsika tena hafahafa mandritra ny ora maro na amin'ny "sarimihetsika mamatonalina." Ny sasany amin'ireo fandaharana ireo dia hampiditra mpandresy ghoulish, toy ny Los Angeles 'Vampira sy Zacherley ao Philadelphia, Ireo olona malaza dia hanampy ny fandaharana hampivoatra ny fandaharana.
Tany am-piandohan'ireo taona 1970, dia nanomboka nilalao horonantsary "ambanin'ny tany" ireo teatra tamin'ny tanàna lehibe maromaro, toy ny "sarimihetsika mamatonalina", matetika mandritra ny volana maro na mandritra ny taona maro raha toa ny fivarotana tapakila. Ohatra, ny "El Topo" (1970), "Pink Flamingos" (1972), ary ny "The Harder They Come" (1972), izay samy nanana lava-be tao amin'ny teatra toy ny renin'i Elgin The New York City. Raha ny marina, ny sarimihetsika malaza tamin'ny mamatonalina nandritra ny fotoana rehetra, "The Rocky Horror Picture Show", dia navoaka tsy tapaka nanomboka tamin'ny 1976. Ireo mpandray anjara tsy tapaka dia mamerina ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ilay sarimihetsika, miakanjo toy ny olona tiany indrindra, ary manipika zavatra eo amin'ny efijery (be dia be ny fahasosoran'ny mpilalao teatra sy ny tadio).
Na dia nihena aza ny lazan'ny lahatsary misasakalina tamin'ny fampidirana haino aman-jery an-trano, tsy nanova ny filalaon'ny mpankafy izany ho an'ny sarimihetsika kolotsaina. Raha ny marina, ny VHS dia nanampy tamin'ny fampielezana ny lazan'ny sarimihetsik'i kolotsaina, izay nanome sarimihetsika maro tsy misy fankasitrahana vaovao.
Raha ny filma ara-kolotsaina dia avy amin'ny rakitsary momba ny siansa momba ny haino aman-jery amin'ny sarimihetsika sarimihetsika mampihoron-koditra sy ny zava-drehetra eo anelanelany, dia misy toetra vitsivitsy izay nozarain'ny ankamaroan'ny filma:
Ny fepetra iray ampiarahan'ny sarimihetsika kolotsaina rehetra dia ny hoe tsy malaza amin'ny mpihaino ankapobeny izy ireo na any amin'ny biraon'ny boaty ... farafaharatsiny tsy voalohany.
Raha ny marina, ny famaritana hoe "kolikoly" dia midika fa ireo sarimihetsika ireo dia kely fa manaraka fanoloran-tena.
Amin'ny tranga maro, manomboka amin'ny sarimihetsika ambany sarimihetsika ny sarimihetsika kolotsaina amin'ny famoahana voafetra. Ao amin'ny hafa, izy ireo dia famoahana tantara an-trano avo lenta izay tsy mahavidy tapakila mandritra ny diany. Amin'ny toe-javatra roa, ny mpanatrika izay manana fahafahana mahita ireo sarimihetsika dia mamelatra ny teny momba ny zavatra hitany. Vetivety, ny lazan'ny sarimihetsika dia mitombo amin'ny fomba tsy ampoizina sy tsy misy dikany, eny fa na dia ny mpijery aza indraindray no nijery ny horonantsary voalohany.
Tena ratsy ny ratsy
Na dia misy sarimihetsika kolontsaina marobe aza dia manentana ny fanohanan'ny mpankafy noho ny tsy fankasitrahan'ny olon-tsotra azy, ny sasany dia lasa kolotsaina noho ny antony hafa: satria sarimihetsika mahatsiravina izy ireo.
Ny "Reefer Madness" (1936), " Plan 9 avy any ivelan'ny habakabaka" (1959) sy "The Room" (2003) dia heverina ho telo amin'ireo horonantsary ratsy indrindra hatramin'izay, saingy izany indrindra no mahatonga ireo mpankafy sasany hahita azy ireo .
Ireo sarimihetsika telo ireo dia ohatra vitsivitsy amin'ireo sarimihetsika malaza ratsy izay sarimihetsika malaza amin'ny mamatonalina.
Ny horonantsary kolontsaina hafa dia malaza na dia eo aza ny tetibola ambany sy ny tsy fahampian'ny vokatra mahamendrika. Troma Entertainment dia namoaka horonantsary am-polony maro izay heverina ho kolontsain'ny kolontsaina na dia maro amin'ireo sarimihetsika aza no manana teti-bola tena ambany. Ny sarimihetsika malaza Troma, 1984 "The Toxic Avenger", dia nahomby tokoa fa ny studio tsy miankina dia nanjary nifantoka tamin'ny resaka firaisana ara-nofo amin'ny horonantsary mampihoron-koditra (na mampatahotra na mampihomehy) taorian'ny famotsorana azy ho fikasana hamerina indray ny fahombiazany.
Etsy ankilany kosa, ny horonantsary kolontsaina toy ny " Night of the Living Dead " (1968) sy " The Evil Dead " (1981) dia nanjary nankafizin'ireo mpilalao sarimihetsika lehibe izay tsy nahazo ny fankasitrahana mendrika fony izy ireo navoaka voalohany. Raha ny tena izy dia azo antoka fa ny roa tamin'ireo horonantsary ireo dia efa nihanitombo ny toetr'izy ireo tamin'ny kolontsaina satria miharihary ankehitriny ny fankasitrahana ny kalitaony.
Mandehana any Extremes
Maro ny sarimihetsika momba ny kolotsaina no malaza noho ny adin-tsaina na "ambanin'ny tany". Ny sarimihetsika toy ny "The Rocky Horror Picture Show" (1975) dia nandika ny tabilao ara-piraisana ara-nofo, raha ny " The Boondock Saints " (1999) dia nanjary fahombiazana tamin'ny DVD taorian'ny fanafahana tsy nahomby tao amin'ny sehatra dimy monja noho ny herisetra. Na dia mety ho sahiran-tsaina toy izany aza ny mpihaino sy mpitsikera malaza toy izany, na dia manelingelina aza ny sasany, ny hafa dia manaiky an'ireny sarimihetsika ireny mba hanomezana fahafaham-po ny mpihaino.
Ohatra, mialohan'ny fizarana dizitaly, ireo horonantsary horonantsary avy amin'ny mpilalao sarimihetsika miasa any Japana, Espana ary Italia dia nokaramaina tamin'ny VHS sy DVD avy amin'ireo mpankafy Amerikana avy amin'ny karazana, anisan'izany ny sarimihetsika izay tsy nahita mihitsy ny famoahana ofisialy tany Etazonia.
Anatin'ireo mpankafy mpilalao sarimihetsika, nanjary "hambom-poana" ho azy ny "fitenenana" momba ny filokana tsy dia fahita firy sy malaza.
Raha maro ireo sarimihetsika mahazatra manjavona amin'ny maso manoloana ny fahavitan'ny andian-dahatsary voalohany, dia mitombo hatrany ny lazan'ny filoloha kolontsaina. Na dia nalaza aza ny lazan'ny sarimihetsika kolotsaina tamin'ny fandaharam-potoana amin'ny misasakalina tao an-tanàn-dehibe ary matetika navoakan'ny VHS na DVD kopia, dia nampitombo ny fanindrahindran'ny sarimihetsika sangan'asa sasany ny Internet sy ny streaming digital.
Afaka mizara ny hafanam-pony ireo mpankafy an'ireny sarimihetsika maneran-tany ireny. Ohatra, ny " The Big Lebowski " (1998) dia nanamavo ny biraon'ny boaty nandritra ny famoahana voalohany azy, fa ny lazany hatramin'izay dia nahazo loka isan-taona "Lebowski Fest" izay mankalaza ny lafiny rehetra amin'ny horonantsary ary na dia ny fivavahana antsoina hoe "Dudeism" ny anaram-bosotr'ilay tovolahy.
Vitsy ny sarimihetsika afaka manana izany fiantraikany amin'ny mpijery izany ary manentana ny fanoloran-tena toy izany avy amin'ireo mpankafy azy ireo, izay mahatonga ny sarimihetsik'i filma angamba ny karazana sarimihetsika tsara indrindra - fialam-boly tsy misy farany ho an'ireo mpankasitraka be mpankasitraka!
Ny tantaran'ny filma 3-D
'2 Fast 2 Furious' - Paul Walker sy Tyrese Interview
Inona avy ny horonan-tsary ao amin'ny 'Twilight' leo?
Ireo horonan-tsarimihetsika 6 tsara indrindra amin'ny fifaninanana
Ny biography of Tatum O'Neal, Oscar Winner Yane Ever
Nahoana no i Disney no mametraka ny tsindry amin'ny 'alika kely 2'
Ahoana no niakaran'ny Sinema sy ny fotsy hoditra?
Noporofoin'i Sony ve ny fakana sarimihetsika momba ny sarimihetsika ho fiderana ny sarimihetsika?
Iza no mihira ny zavatra ao amin'ny 'Rent' Movie Soundtrack?
Ny sarimihetsika 'tsy azo sakanana' miorina amin'ny tantara marina?
Fanadinadinana: Mandy Moore avy amin'ny "A Walk to Remember"
Olona manidina, voavoly voankazo
Ahoana no mamerovero ny fitaovam-piadiana simika?
Electron Affinity Famaritana
SAT Scores amin'ny fidirana ao amin'ny Colleges and Universities Big Conference South
Inona no lazain'ny finoana silamo momba ny fifantenana ny lahy?
Fanamboarana akanjo fotsy
Ny toetra mampiavaka ny Reptilia
Leo sy Aquarius Love Compatibility
Manantitrantitra ny fanoratana
Inona no tadiavina tsara?
Ny momba ny fararobia, ny tranonkala malaza amin'ny Internet
Ahoana no fomba ampiasana ny manam-pahaizana iray hanatsarana ny kilasinao?
Fahatakarana karazana fampihorohoroana samihafa
Inona no dikan'ny hoe omniscient?
Inona no niandohan'ny korontana ao Kashmir?
Nahoana no tsy afaka manompo bebe kokoa mihoatra ny folo taona ny talen'ny FBI?
Fitaovam-piadiana an-jatony amin'ny ririnin-tsolika sy fiarovana ny moron-drano
Inona no dikan'ny hoe Shiitaon amin'ny teny japoney?